Eyona nto intle ngeJuan del Val
UJuan del Val
Incwadi kaJuan del Val
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaJuan del Val
Ubuchule, ishishini kunye nentwana yolwaphulo-mthetho (ehlala inamathela kwihlabathi leencwadi kunye neeplani zazo, nangona ngamanye amaxesha ziye zandiswa nakumajelo eendaba), weza kuJuan del Val ngokulandelelana emtshatweni wakhe kunye nombonisi weNuria Rock. Kodwa ukusukela apho ...
Kubonakala ngathi kuyaxoka, nguJuan del val
UJuan del Val uye wakonwabela ukuphinda azibuze ukuba ungubani na. Omnye kuye kungekudala, evela kumasiko amaninzi nakwimikhuba emibi, hayi kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Nayiphi na injongo yobomi bomntu iba yinxalenye yobomi obuyintsomi. Imemori, kumxholo wayo ...